Noocyo Badan oo Galmo ah ayay Lamaantaada kaaga baahantahay - Hablaha Media Network
Noocyo Badan oo Galmo ah ayay Lamaantaada kaaga baahantahay
HMN:- Ninyahow Kala bedbedel noocyada galmada Galmo kala duwan oo noocyo badan leh waxa ay keentaa…raaxo badan, laakiin galmo hal nooc oo kali ahi waxa ay keentaa xiiso jab. Mararka qaar waxa fiican in saacado la wada raaxaysto halka mararka qaarna mid gaaban oo deg deg ahi xiixo badan leedahay.
Isla markaana waa in uu kolba qof ahaado ka firfircoon ee shaqada aad u wada halka ka kalena ka yahay mid degan.
Ogow waqtiga aad joojinayso galmada.
Waa in aad joojisaa marka ay dhamaato, ragga qaar ayaa waxa ay u maleeyaan sii wadida galmadu mark ay dhamaatay in ay tahay mid fiican. Dhab ahaantii waxa ay rabtaa xaasku in aad sii wadid galmada in ay ka biyo baxayso, ka dibna jooji.
RIIX HALKAAN SI AAD UGA BOGOTO